Circuit Breaker 1 ၏ ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက် - သတင်း - Wenzhou Zhechi Electric Co., Ltd
ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်circuit breaker 1
1. circuit breaker အကာအကွယ် ကိရိယာ၏ ဖွဲ့စည်းမှု
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ double-bus နှင့် single-bus wiring mode တွင်၊ transmission line protection သည် trip command တစ်ခုသာပေးပို့လိုသောအခါ၊circuit breakerလိုင်းအဆုံးတွင် ခလုတ်တိုက်သွားလိမ့်မည်။ သဘာဝအားဖြင့်၊ ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းသည် ဤ circuit breaker ကိုသာ ပြန်လည်ပိတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် အကာအကွယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ 3/2 ဝိုင်ယာကြိုးမုဒ်တွင်၊ ချို့ယွင်းမှုကာကွယ်ရေး၊ အလိုအလျောက်ပြန်လည်ပိတ်ခြင်း၊ သုံးဆင့်မကိုက်ညီမှုကာကွယ်ရေး၊ dead zone ကာကွယ်ရေးနှင့် အားသွင်းခြင်းကာကွယ်ရေးတို့ကို စက်တစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤကိရိယာကို circuit breaker protection ဟုခေါ်သည်။
2. Breaker ချို့ယွင်းမှုကာကွယ်မှု
Breaker ချို့ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ချို့ယွင်းနေသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ၏ ထပ်ဆင့်ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်သည် ခရီးလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုထုတ်ပေးပြီး circuit breaker လည်ပတ်ရန် ငြင်းဆိုသည့်အခါ၊ ချို့ယွင်းနေသော ပစ္စည်းများ၏ ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်နှင့် ငြင်းဆိုထားသော circuit breaker ၏ လက်ရှိအချက်အလက်များကို ချို့ယွင်းမှုကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ၏circuit breaker. ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု အတိုင်းအတာကို အနည်းဆုံးကန့်သတ်ထားပြီး ဓာတ်အားလိုင်းတစ်ခုလုံး၏ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်နှင့် ဂျင်နရေတာကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများ ဆိုးရွားစွာ လောင်ကျွမ်းခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် တူညီသော စက်ရုံရှိ အခြားဆက်စပ် circuit breaker များကို အချိန်တိုအတွင်း ဖြတ်တောက်ပါ။ ထရန်စဖော်မာများနှင့် မဟာဓာတ်အားလိုင်း ပြိုကျခြင်း၊
မတော် တဆ ပြိုကျသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ circuit breaker ချို့ယွင်းမှုကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို 220kV နှင့်အထက်တွင် configure လုပ်ထားသည်။circuit breakers များနှင့် အရေးကြီးသော 110kV ဆားကစ်ဘရိတ်ကာအချို့ကိုလည်း ချို့ယွင်းမှုလုပ်ဆောင်ချက် တပ်ဆင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် side circuit breaker ၏ ချို့ယွင်းမှုကို အကာအကွယ်ပေးပြီးနောက်၊ side circuit breaker ၏ bus ပေါ်ရှိ circuit breaker များနှင့် အလယ် circuit breaker များအားလုံး ခလုတ်တိုက်သင့်ပြီး remote trip function ကို activated လုပ်ထားသင့်ပြီး တစ်ဖက်ရှိ circuit breaker ကို လည်ပတ်ရန်၊ side circuit breaker နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလိုင်း။
အကယ်၍ လိုင်း၏အရန်ကာကွယ်မှုသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ခြမ်းရှိ circuit breaker ကိုဖြတ်တောက်နိုင်သော်လည်း အဝေးထိန်းခရီးစဉ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ချို့ယွင်းမှုကာကွယ်မှုမလုပ်ဆောင်ပါက၊ ၎င်းသည် မှားယွင်းဖယ်ရှားသည့်အချိန်ကို ရှည်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အလယ်တန်း circuit breaker ၏ ချို့ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ခြင်းသည် အခြေခံအားဖြင့် ချို့ယွင်းမှုလုပ်ဆောင်ချက်မှ အစပြုသော အဝေးမှ ခလုတ်တိုက်ခြင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက် ရှိပါသည်။ အရေးယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များcircuit breakerနှစ်ထပ်ဘတ်စ်ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်တွင် ချို့ယွင်းချက်သည် ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်မည်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် 3/2 ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်ထက် ပိုမိုရိုးရှင်းပါသည်။
ပြန်လည်စတင်ရန် နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်- တည်နေရာ-သဟဇာတမဖြစ်သော စတင်ခြင်းနှင့် ပြင်ပခရီးစတင်ခြင်း။ ပြင်ပခရီးစတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ လိုင်းကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်သည် ခရီးလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုပေးပို့ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ပြန်လည်စတင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
တည်နေရာသည် စတင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ- single-phase stealth jump start နှင့် three-phase stealth jump start တို့ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။
ကာကွယ်မှုခရီးစဉ်စတင်ခြင်းကို- အဆင့်တစ်ဆင့်ခရီးစတင်ခြင်းနှင့် သုံးဆင့်ခရီးစတင်ခြင်းဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။
ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း၏ ဆက်တင်နည်းလမ်းနှင့်ပတ်သက်၍၊ ၎င်းအား လိုအပ်ချက်များအရ ရွေးချယ်နိုင်သည်- အဆင့်တစ်ဆင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း၊ သုံးဆင့်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပိတ်သိမ်းခြင်းတို့ကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကြင်နာပါ။ ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ခလုတ် သို့မဟုတ် ဆက်တင်စာရင်းရှိ ထိန်းချုပ်မှု စကားလုံးအား ပြန်လည်ပိတ်ခြင်းမုဒ်ကို ရွေးချယ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပြန်လည်ပိတ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်း- လိုင်းသုံးဆင့် ရပ်တန့်ခြင်းအတွက် အောက်ပါနည်းလမ်းသုံးခုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထပ်တူပြုခြင်းမုဒ်- လိုင်းနှင့် ထပ်တူပြုခြင်းဗို့အား 40V ထက် ပိုများသည်၊ ထို့နောက် ထပ်တူပြုခြင်း ဗို့အားရှိ လိုင်းဗို့အားနှင့် တူညီသောအမည်၏ အဆင့်ဗို့အကြား အဆင့်ကွာခြားချက်သည် ပုံသေတန်ဖိုးဆက်တင်၏ အကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်သည်။
ဗို့အားမရှိခြင်းရှာဖွေခြင်းနည်းလမ်း- တူညီသောအချိန်အပိုင်းအခြား၏လိုင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားသည် 30V ထက်နည်းပြီး သက်ဆိုင်ရာ TV အား ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်ခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းမရှိပါ- စစ်ဆေးခြင်းမပြုလုပ်ပါ၊ အချိန်ကျလာသောအခါ ပိတ်မိန့်ထုတ်ပေးပါသည်။
ပထမအပိတ်နှင့်နောက်ပိတ်ပြန်ပိတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍- ပထမအပိတ်ဘရိတ်ကာသည် အမှားကြောင့်ပိတ်သည်၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဘရိတ်ကိုပိတ်ခြင်းသည် မပိတ်တော့ပါ။ 3/2 ဝိုင်ယာကြိုးမုဒ်တွင် ဘေးပတ်ဆားကစ်ဘရိတ်ကာနှင့် အလယ်ကို ပြန်လည်ထုတ်ယူပြီးနောက် ပထမအပိတ်နှင့် အပိတ်ပြဿနာရှိနေပါသည်။circuit breaker.
ပထမအကြိမ် ပြန်ပိတ်ခြင်းသည် အချိန်တိုအတွင်း နှောင့်နှေးပြီးနောက် အပိတ်သွေးခုန်နှုန်းကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ပထမအပိတ်နှင့် ပြန်လည်ပိတ်ခြင်းစတင်သောအခါတွင်၊ အထွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆက်အသွယ်ကို နောက်ပိတ်အပိတ်နှင့် ပြန်လည်ပိတ်ခြင်း၏ "ပထမပိတ်ခြင်း" ဒစ်ဂျစ်တယ်ထည့်သွင်းမှုအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ပိတ်ပြီးနောက် ပြန်အပိတ်ပြုလုပ်သူသည် "Latching first close" input contact ကို ပိတ်ထားကြောင်း သတင်းအချက်အလက်ကို လက်ခံရရှိသောအခါ၊ ၎င်း၏ ပြန်ပိတ်ခြင်းသည် အချိန်ပိုကြာပြီးနောက် အပိတ်သွေးခုန်နှုန်းကို ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ပိတ်ပြီးနောက် ပြန်ပိတ်ခြင်းသည် "လော့ခ်ချခြင်း ပထမအပိတ်" ထည့်သွင်းမှုတွင် ထည့်သွင်းသည့်အခါ ပိုကြာသည့်နှောင့်နှေးမှုဖြင့် အပိတ်သွေးခုန်နှုန်းကိုသာ ပေးပို့သည်။
"ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပထမဦးစွာ" - ပျော့ပျောင်းသော နှိပ်ပန်းကန်၊ မာကျောသော ပန်းကန်ပြား
အချိန်တိုတို နှောင့်နှေးမှု (ဆက်တင်ကို ပြန်ပိတ်ချိန်၊ 0.7s ခန့်)
"Latch first close" အဝင်ကိုဖွင့်ပါ။
"ပိတ်သိမ်းပြီးနောက် ပုံသေ" ထိန်းချုပ်စကားလုံး
အချိန်ကြာမြင့်စွာနှောင့်နှေးခြင်း (အချိန်ကြန့်ကြာမှုကို ပြန်လည်ရရှိပြီးနောက် သတ်မှတ်ချိန်ကို ပြန်လည်ပိတ်ခြင်း၊ 1.4 စက္ကန့်ခန့်)